Kuisa mari mumusika wemasheya, asi kubva kune nguva yekuisa | Ehupfumi Zvemari
Chengetera mumusika wemasheya, asi kubva kumari yemari
Kuisa mari mumusika wemari kunoitwa kuburikidza nekutenga uye kutengeswa kwemasheya mumisika yemari yemari. Asi parizvino une zano rekutanga rekudzora njodzi uye, sezvinei, wana a mashandiro kune yako mari izvo zvinopfuura izvo zvechigadzirwa zvebhengi zvigadzirwa. Iyo inoverengerwa kuburikidza nenguva dhipoziti inogadzirwa neanenge ese emabhangi masangano. Icho chigadzirwa chakasarudzika chinokutendera kuti utore mukana wekushanduka kwakanaka kwemisika yemari.
Imwe yemaitiro ayo akakosha ndeyekuti hapana nguva iwe yauchazokwanisa kuburitsa kurasikirwa. Asi pane zvinopesana, iwe uchave uine yakagadziriswa uye yakavimbiswa kufarira gore rega. Ichave iri diki kwazvo, asi kana mamiriro ezvekuchengetedzeka akabatana nemadhipoziti akasangana, unogona kusimudzira margins aya. Kusvikira tora pakati pe3% uye 6% anenge purofiti. Chero zvazvingaitika, aya madhipatimendi ane akareba ekuchengetedza nguva kupfuura mune akajairwa mamodheru. Hazvishamisi kuti vanowanzo kukwira kusvika pamwedzi makumi maviri nemana kana makumi matatu nematanhatu maunofanirwa kunge uine mari huripo isina simba.
Imwe yemabhenefiti anopihwa nemagadzirirwo emabhangi aya ndeyekuti anochinjirwa kumari dzinodhura dzemhuri dzese. Kusvika padanho rekuti iwe unokwanisa kuita chibvumirano cherudzi urwu rwezvigadzirwa zvebhengi kune huwandu hushoma kubva makumi matatu euros. Kune rimwe divi, izvo hazvirevi makomisheni kana zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kwavo kana kugadzirisa. Ivo vanongotakura chete yakakwira kwazvo mitero yemitero yekukanzura kwavo kwekutanga uye izvo zvinogona kusvika 2% pane iyo mari yakaiswa mune aya madipoziti. Chero zvazvingava, ayo makanika akafanana neaya eimwe nguva anoisa.
1 Madhipatimendi akabatana nekuchinjana
2 Zviratidzo zvaunogona kubhadhara
3 Investment kusiyanisa
4 Hapana kurasikirwa kunoitwa
5 Zvakanakira kirasi ino yemadhipoiti
Madhipatimendi akabatana nekuchinjana
Chimiro cheiyi kirasi yeakagadzika-term dhipoziti zvinoenderana nenyaya yekuti iwe unowana a shoma purofiti uye yakachengetedzwa nekuchengeta mari yako. Asi kana zvikaitika, inogona kukwidziridzwa neshanduko inofadza yebhasikiti yemasheya iyo inoenderana neichi chigadzirwa chebhangi. Kana izvi zvikasakwanisika, mushandisi anozogashira mashandiro pasi pekuti dhipoziti yatengeswa. Semhedzisiro yeaya maitiro, iwe hauzombowana kurasikirwa pane yako mari chirevo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei icho chakaitirwa kune rakanyatso tsanangudzwa mushandisi chimiro. Munhu anochengetedza, uyo anoda kuchengetedza guta rake uye asingade kutora njodzi mukuita kwake.
Chero zvazvingaitika, iri zano rakasarudzika kusimudzira marara asina kusimba anopiwa nemutengo wemari panguva ino. Nehuwandu hwechimbadzo icho haiwanzo pfuura 0,1% mazinga. Pasina kudiwa kwekuzviratidza pachako nekuchinja-shanduka mumisika yemari, senge nekutenga kwakananga kwemasheya pamusika wemasheya. Kunyangwe pane zvinopesana, iwe hauzove nemukana wekutora izvo zvinowedzera mumutengo wekutaurwa. Neichi chikonzero, ichi hachisi chakakurudzirwa chikumbiro chenguva yekusimudzira mumisika yemari. Izvo ndezvekusarudza chengetedzo pane purofiti uchitora dzimwe njodzi.
Zviratidzo zvaunogona kubhadhara
Iko kupihwa kunopihwa nemabhangi pane ino kirasi yemadhipoiti haina kuwanda zvakanyanya uye ivo vanogumira kune mashoma chaiwo marongero. Imwe yeaya mamodheru inomiririrwa ne Yakabatanidzwa Deposit iyo Office Direct yanga ichishambadza kwemakore akati wandei. Makanika ayo ari nyore kunzwisisa sezvo hafu yemari yakatemerwa kuiswa pamwe nekugara kwenguva yemwedzi gumi nematanhatu inoshuma kufarira kwegore rega kwe13%. Asi izvo zvinogona kukundwa kana chimwe chikamu chemari, iyo yakatemerwa kuenzana, ikazadzisa zvinangwa zvayo.
Haisi iyo yega dhipoziti inowanikwa mumusika webhangi. Nekuti zvirikuitika, iyo Yakasanganiswa Deposit BBVA Funds inowanikwawo, iyo inogovera kanokwana 30% yemari yose yakatanga kudyarwa muhomwe yekudyara uye inosvika kusvika ku0,75% pagore mune dhipoziti pachayo. Ichi chigadzirwa chemari chinogona kunyoreswa kubva pamwero wakaderera kune vese vashandisi, kubva makumi matatu euros. Yakasarudzika ndechimwe chezvinhu izvo zvakasarudzira zano iri. Zvekuti nenzira iyi, vanoisa mari vanogona kuswedera pachikumbaridzo che1% muhuwandu hwechimbadzo hwakapihwa.
Iyi ndiyo kiyi huru umo zvigadzirwa izvi zvebhangi zvinogadzirwa. Kwete pasina, vanoisa mari muzvikamu zvingasiyana pakati peyakagadziriswa uye inoshanduka mari. Kusvika padanho rekukwanisa kuenzana, ndokuti, 50% mune ese ari maviri mamodheru kuitira kuti kudyara kune mamwe emamodheru anofungidzirwa mune ino term dhipoziti haina kubviswa. Kunyangwe mukupedzisira iwe uchave iwe unogadza kukura, huwandu uye zvimwe hunhu hweizvi zvigadzirwa zvemari. Mukati mechipo chidiki kwazvo uye kwete zvachose homogeneous mukirasi ino yeakasarudzika mafambiro aunenge uripo.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti izvi zvigadzirwa zvinogona kubatanidzwa kune mari kana tswanda yezvikamu. Zvichienderana nezvamunofarira semushandisi uye zvimwe zvekufunga zvaunofanira kufunga kubva zvino zvichienda mberi. Iyo imwe nzira inotyisa ye sanganisa mari yakatarwa nemari inoshanduka. Asi nevimbiso izere yekuti kana wakura mipiro yezvemari pamwe neicho chinoenderana chichawanikwa. Nekuwedzera mukuita purofiti maererano neyakajairika term term dhipoziti. Mune izvo zvakagadziriswa seimwe yezvigadzirwa zvekuchengetedza kumusoro izvozvi, kunyangwe pasina kupihwa kwakajeka kubva kumabhangi.
Hapana kurasikirwa kunoitwa
Muzviitiko zvese, izvo zvigadzirwa izvo zvinoregererwa kubva pakutambura kurasikirwa nekuda kwekuchinja-shanduka kwemari yemari uko mari yakaiswa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vakagadzira kukwezva kukuru pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe pasina mukana wekutora kukwirisa kwekukwira mumisika yemari. Kwete zvisina maturo, kana iwe uchida kuwana juicy capital capital inowana zvichave zvirinani kuti iwe uende wakananga kuchikamu chemari yakachena. Kusvika pakuti iyo inonyanya kubatsira sarudzo pamusoro pekufamba kumusoro muzvikamu.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kwazvo kubva zvino zvichienda mberi kuti irworwu rudzi rwakakosha rweinvestment inogona kunge iri mhinduro kwayo yekuchengetedza mari muzviitiko zvisina kunaka pamisika yemari. Pamusoro pemabasa emusika wemasheya anotakura njodzi huru mukuchengetedza zvido zvako senge diki nepakati saver. Icho chokwadi chekuti a profitability Ndicho kuwedzera kukosha pane dzimwe nguva. Kusvika padanho rekuti inogona kushanda sebhiriji kudyara kune imwe yakasarudzika modhi iyo ichaunza iyo inodzvinyirira kudzoka.
Zvakanakira kirasi ino yemadhipoiti
Nguva dhipoziti yakabatana nezvikwereti inopa akateedzana mabhenefiti aunofanira kufunga nezvayo kana iwe uchida kuzvinyorera pane imwe nguva muhupenyu hwako. Kwete chete kubva pakuona kwemubhadharo, asi kubva kune imwe kirasi yemazano. Semuenzaniso, kurerukirwa kwechimiro chayo kuisimbisa chero nguva. Kubva pane aya mazano iwe unowana chinopfuura chimwe chete chikonzero chekunakidzwa nerudzi urwu rwezvigadzirwa zvebhengi. Sezvo mune anotevera zviito zvatiri kuzotsanangurira kwauri pazasi.
Hazvidi kuti ruzivo rwakakosha misika yezvemari, asi zvinopesana icho chigadzirwa chinogadzirirwa kune ese marudzi emapa profiles. Iwo haasi akaomarara mamodheru uye iwe unogona kuasanganisa iwo kubva yekutanga nguva.
Icho chiri pamusoro zvigadzirwa zvakavimbiswa uye nekudaro iwe uchagara uchiwana kudzoka pane yako mari. Chero chii chinoitika mukati menguva yekugara zvachose kunoiswa mazwi aya.
Iyo inoumbwa senzira inoshanda kwazvo kune simudza purofiti yemari yakatarwa izvozvi. Kusimudza kudzoka nezvishoma zvegumi muzana zvichienzaniswa nemaitiro echinyakare.
Kushaikwa kwemubhadharo ndechimwe chezvikurudziro zvine madipoziti aya sezvo zvichizokutendera kuti uve ne yakakura kudhara muakaundi yako yekutarisa painopera. Chinhu chisina kuitika nezvimwe zvigadzirwa zvakagadzirirwa kuchengetedza.
Iwo anochinjika kune ese marudzi emipiro yemari uye nekudaro iwe unogona kugovera chikamu chehomwe yako yekuchengetedza kune iyi yakasarudzika mhando yekudyara. Kubva ku5.000 euros unogona kuhaya chigadzirwa chine hunhu uhu.
Kana iwe uchizoda iyo mari yakadyarwa mumwedzi iri kuuya, haisi iyo yakanakisa modhi iwe yaunofanira kuhaya. Nekuti ine mubhadharo wekutanga kudzima izvo zvinonyanya kuda. Kusvika padanho rekutora chikamu chemabhenefiti akagadzirwa kubva pakagadzwa.
Uye pakupedzisira, haugone kukanganwa izvozvo hapana kana mukana waunowana kuwedzerwa kaviri manhamba. Kunyangwe kana iwo mamiriro akasunganidzwa nekudyara kwemari akasangana. Pakupedzisira, iwe unowana 8% yekudzoka pane aya mabasa. Pasina kukwanisa kuwana kudzoka kukuru mumabasa akaitwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chengetera mumusika wemasheya, asi kubva kumari yemari
Nzira dzekudyara: maitiro ekuishandisa?